सांसद चौधरीको प्रश्न- भूमि रक्षकलाई विखण्डनकारी भन्ने, नदी बेच्नेलाई के भन्ने ? | नयाँ शक्ति नेपाल
सांसद चौधरीको प्रश्न- भूमि रक्षकलाई विखण्डनकारी भन्ने, नदी बेच्नेलाई के भन्ने ?
कोहलपुर (बाँके) । नयाँ शक्ति पार्टी नेपालको नेतृ तथा संसदीय दलकी नेता गंगा चौधरीले यो देशको भूमिलाई उर्बर बनाउनेहरुलाई विखण्डनकारीको बिल्ला भिराइएको भन्दै कडा प्रतिवाद गर्नुभएको छ ।
नयाँ शक्ति पार्टीको जारी हिमाल–पहाड–तराई/मधेश थरुहट राष्ट्रिय अभियानलाई शनिबार बाँकेको कोहलपुरमा सम्बोधन गर्दै उहाँले उक्त कुरा बताउनुभएको हो । 'यो भूमिलाई उर्वर बनाउने को हो ?,' उहाँले भन्नुभयो, 'जसले यो भूमिलाई उर्वर बनायो त्यसलाई विखण्डनकारीको बिल्ला भिराइन मिल्छ ?'
उहाँले देशलाई उर्वर भूमिमा रुपान्तरण गर्नेहरुलाई नै शासकहरुले दोस्रो नागरिकको रुपमा किन हेर्ने गरिएको गुनासो गर्नुभयो । 'जसले यो देशको एक चिम्टी माटो बेचेको छैन, त्सलाई देश द्रोहीको विल्ला भिडाइन्छ,' उहाँले भन्नुभयो, 'तर, यो देशको पानी र जमिन बेच्नेलाई के भन्ने ?'
उहाँले २१ औं शताब्दीका नेपाली जनतालाई अब कसैले झुक्याउन नसक्ने बताउनुभयो । नेतृ चौधरीले देशको आर्थिक समृद्धिका लागि देशका युवाहरुलाई देशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले नयाँ शक्ति सशक्त बन्नुपर्ने धारणा राख्दै पार्टीलाई भिटामिन र खोपको आवश्यकता रहेकोसमेत बताउनुभयो ।